Vista's Colorful Planet: ဒိုးတူပေါင်ဖက်
ဗစ်တောင် အမြင်မှန်ရလာပြီပဲကိုးးးး ဟိ
အဲလိုမျိုးအရမ်းနေချင်တာ.. ဒါပေမယ့် wifi လေးတော့ရှိချင်တယ်.း)
ဒိုးတူပေါင်ဖက် = working as comrades ( မျိူးအတွက်)
မမဆင် ပေါင်မဖက်ချင် ခါးဖက်လိုက်လေ ..ဟိဟိ
ဗစ်စ်ပြောတဲ့ နောက်ဆုံးအပိုဒ် တူတယ်ဆိုတာ...ခုသိပြီ...:)
ဗစ်စ်ရေ...ခုနက မတက်ဂ်လိုက်မိလို့...တက်ဂ်ပို့စ်လေး ရေးပေးပါနော်...
တလလောက်တော့ သွားနေချင်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲပေါ့။
ဒါပေမယ့် အင်တာနက်မရတော့ ဆိုးတာပေါ့ ဟဲဟဲဟဲ
လှတယ် .. အေးချမ်းလိုက်တာ
အတွေးလေးရော ဓာတ်ပုံလေးတွေရော ကောင်းတယ်... thumb up... :)
ကျနော့် ပုံတွေမှာလည်း နာမည်ပါပါတယ်
ကျနော်တို့ က ဓါတ်ပုံသမားတွေမို့sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတာ နားလည်စေချင်ပါတယ်
အကို တို့ကဗျာစပ်ထားသလိုပေါ့လေ ကျနော်
တို့ ကလည်း ကင်မရာနဲ့ဖန်တီးထားတာပါ
ကဗျာသမားတွေကိုတော့ လေးစားပါတယ် ကဗျာဆို ၁ လုံးမှ မစပ်တတ်လို့ ပါ
ကျနော်က မချယ်မဟုတ်ပါဘူး ကျနော်က ဗစ်စတာပါ
ချယ်က ကျနော့်သူငယ်ချင်းပါ မေဆိုရေးပေးသွားတာ သူပါ . သူလည်းကြားညပ်သလိုဖြစ်လို့ လန့် နေတယ် ကျနော်စိတ်မဆိုးပါဘူး ယူသုံး
လို့ လည်းရပါတယ် ..
နာ ဘယ်တုန်းက ဒီလိုပီယဝါစာတွေ တတ်သွားပါလိမ့်
ဗျစ် စီဘောက်ကို ရောက်ပြီးမှ ဒီလိုဖြစ်သွားတာ